Faah faahin ka soo baxaya dagaalo qasaare geystay oo ka dhacay duleedka Baydhabo | Sagal Radio Services
Faah faahin ka soo baxaya dagaalo qasaare geystay oo ka dhacay duleedka Baydhabo
Dagaal culus oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo, kadib markii gaadiid dagaal ay wateen ciidamada dowladda ay wadada u galeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen ilaa toban ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah, waxaana afar ka mid ah ay ahaayeen ciidamada dowladda, iyadoo gaari dagaal oo ka mid ahaa gaadiidkii ay wateen ciidamada dowladda laga gubay.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ka baxay magaalada Baydhabo ayaa la sheegay inay soo qaadeen qaar ka mid ah meydadkii ciidamada dowladda ee dagaalka ka dhacay inta u dhaxeysa Daynuunay iyo Baydhabo looga dilay.
Isbitaalka Baydhabo ayaa la dhigay dhaawacyada ciidamo ka tirsan dowladda oo ku dhaawacmay dagaalkii shalay, waxaana deegaankii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo halkaas ka baadigoobayay dagaalyahaadii ka tirsanaa Shabaab.
Dagaalyahanada Shabaab ayaa weeraro gaadmo ah oo dhaba gal ah ku qaada gaadiidka ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee mara deegaanada iyo degmooyinkii ay dhowaan la wareegeen, waxaana deegaanada qaar ay yihiin kuwo go'doonsan oo Al-Shabaab ku sugan yihiin howdka.